Mamiriro ekunze uye Zvehupfumi Zvemari Ikozvino kweGreen Tourism Kudzoreredza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Mamiriro ekunze uye Zvehupfumi Zvemari Ikozvino kweGreen Tourism Kudzoreredza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi
Seychelles green green symposium
Vateereri kubva munzvimbo dzese dzekushanya pamwe nemasangano evagari vakaungana kuEden Bleu Hotel kuGreen Recovery ye Tourism Symposium neChina, Gunyana 23, kuratidza mamiriro ekunze uye kukosha kwehupfumi hwekudzoserwa kwekushanya.
Pane chirongwa chekudyidzana chiri kuitika pakati peSychelles 'Dhipatimendi Rezvekushanya, Ministry of Agriculture, Climate Change uye Nharaunda (MACCE), neBritish High Commission.
Sangano rekusiyirana riri kutaura nezvekuwedzera kwekushomeka kwekushanya kune zvinokanganisa shanduko yemamiriro ekunze.
Iine kutsamira kwakadzama mukushanya, idzi nyaya dzinomiririra tyisidziro huru kuhupfumi.
Ichi chirongwa chekudyidzana pakati peSychelles 'Dhipatimendi Rezvekushanya, Ministry of Agriculture, Climate Change uye Zvakatipoteredza (MACCE), neBritish High Commission, vakaona kuwedzera kwekushomeka kwekushanya kune zvinokanganisa shanduko yemamiriro ekunze. Iyi hurukuro yekusiyirana yakacherechedzawo kugona kwechikamu ichi kumafungidziro enguva refu-ekuderera kwekufamba-famba kwenguva refu kubva kune vafambi vepasirese, nekuda kwekushushikana kuri kuwedzera kwekukanganiswa kwekabhoni nendege. Iine kutsamira kwakadzama mukushanya, idzi nyaya dzinomiririra tyisidziro huru kuhupfumi hwenyika.
Vateereri kubva kune vega uye veveruzhinji zvikamu vakagovana zviripo maturusi uye akanakisa maitiro aripo parizvino kubatsira mukugadzirisa mamiriro ekunze uye kuyedza kudzikisira mukati meindasitiri yekushanya, kukurudzira mamwe mabhizinesi ezvekushanya kuti aite kusimudzira nekusimba kutsigira kuchengetedza. Izvi zvinosanganisira anozivikanwa ezvigadziriso zvitupa, zvine hungwaru uye zvine mutoro marara, mvura uye simba manejimendi masisitimu anoshandiswa munzvimbo, kutenderedza zvakasikwa-mhinduro mhinduro kumasikirwo-akavakirwa mabhizinesi, nekubatanidza kuchengetedza kune yekushanya digitization uye kushambadzira budiriro.
Mukutaura kwavo kuhurukuro yekusiyirana, Gurukota Radegonde vakataura kuti zviitiko zvemakore maviri apfuura zvakatiratidza kukurumidza kuri kuita nyika uye nekushanya kuri panjodzi kune zvekunze zvinhu, kunyanya mudunhu rechitsuwa chidiki.
“Tiri kuonawo kusimuka kwemufambi anonyanya kuchengetedza zvakatipoteredza, ari kuramba achitarisira nzvimbo dzekushanya kuti dzipe mikana yekushanya isingachinji. Semuenzaniso, kutsvagurudza kunoratidza kuti huwandu huri kukura hwevanhu vanoronga kubhururuka zvishoma pazororo ravo kuitira kudzikisira nendege CO2 mweya uye yavo kabhoni tsoka. Pamusoro pezvo, vanoita zvemamiriro ekunze, vatangisa mushandirapamwe une hukasha wekuti "ndege dzinonyadzisa" kutenderera pasirese, kunyanya muEurope, zvichikanganisa kufamba kwenguva refu. Aya mafambiro anoita kunge ari kuwana kubata. Uye ivo havaratidzi zvakanaka kune yedu indasitiri yekushanya. Tinozviona tiri pamharadzano apo patinofanirwa kusarudza zvine hungwaru kuitira ramangwana rinogadzikana uye, kunyanya mhinduro dzemasikirwo dzinova chinhu chikuru mukumhanya kusvika paCOP 26, ”vakadaro Gurukota Radegonde.
Iyo hurukuro yekusiyanisa yakashandawo semukana wekujekesa Secheres'yakagadziridzwa Nyika Yakasarudzika Mipiro (NDCs) - ichitarisa kuzvipira kwenyika kushanya - kuzivisa vanobata nezvevashanyi nezvekukosha kwakakosha kwesangano mukuzadzisa zvinangwa izvi mumakore mashanu kusvika gumi anotevera.
Nhaurirano yepaneru pamusoro wenyaya we "Green Kudzoreredzwa kweKushanya; Zvinangwa, Mikana uye Zvinodiwa ”zvakaitikawo masikati. Mapaneruist akakurukura nezve chiyero chebasa nemikana yekudyara iyo inogona kutorwa nenjodzi kubva kunzvimbo dzekugara. kudiwa kwekudzoreredza iyo inosanganisirwa mukufunga izvo zvido uye zvinonetsa kune vese vanoita zvekushanya; kudzoreredzwa kwegirini kunobatsira sei Seychelles 'Blue Economy, uye kuti kushanya kwakavakirwa musango kunogona sei kuwana mari yezvirongwa zvekuchengetedza kwenguva refu panguva dzezvinetso kune indasitiri yezvekushanya, sezvakaratidzwa nekupararira kuri kuramba kuchiitika kwedenda reCOVID-19 pasi rese.
Vatori vechikamu zvakare vakafunga nezve izvo zvinodiwa kuti uwane Green Kudzoreredzwa kweKushanya - uye kugadzirisa mamiriro ekunze uye kudzikisira tarisiro - sechikamu chekuburitsa gwaro remhedzisiro. Gwaro pfupi iri richaratidza chinangwa cheyosiosiamu, uye muchidimbu kupfupisa nhaurirano nekufungisisa kwakaitwa panguva yechiitiko ichi. Gwaro iri zvakare rinoratidza chipfupi cheNDC-based uye chekushambadzira chakanangana nechisungo - chinoshandiswa senzvimbo yekutarisisa yezano remangwana - vatori vechikamu vanokokwa kusaina.
Zvakakosha, pakanga paine kubvumirana kwakakura pakati pevatori vechikamu kuti Seychelles yakaiswa zvakanaka kuti ichinjane nekuchinja maitiro evatengi mukufamba kwenyika uye kuve mutungamiri wenyika mukushanya kwakasimba - zvine mutsindo kupfuura chero imwe nzvimbo. Iyo Green Kudzoreredza Tourism muSychelles, sekurongwa neSymposium iyi, saka yaizoshandura kutyisidzira kwakakura kwehupfumi, kuita mukana wezvehupfumi wezvenguva refu.